FILOHAN’NY ANTENIMIERAMPIRENENA : Manameloka ny herisetra sy fanolanana
Notsidrian’ny filohan’ny Antenimierampirenena, Chrisitine Razanamahasoa, nandritra ny famaranana ny fivoriana ara-potoanan’ny solombavambahoaka, omaly, fa manameloka tanteraka ny herisetra amin’ny endriny rehetra ny tenany ary manameloka ny tranga momba ny fanolanana izay nahazo vahana tato anatin’ny volana vitsivitsy izay. 21 décembre 2020
Manohana ny ezaka ataon’ny vadin’ny Filoham-pirenena amin’ny firotsahany an-tsehatra mivantana kosa izy ary mbola nanentana ny rehetra hiady amin’ny fidorohana zava-mahadomelina. Araka ny lahateniny, isan’ireo fototra mampirongatra ny fanolanana ny fidorohana zava-mahadomelina ka tokony hatsahatra.
Nanambara koa ity filohana andrim-panjakana ity, fa vonona hatrany ny Antenimierampirenena hiara-hiasa amin’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny hametrahana izay paikady hanatsarana ny toe-piainan’ny vahoaka malagasy hanoherana ny tsy rariny. Nanteriny fa tsy mitsaha-mifandray amin’ny firenen-kafa ny Antenimierampirenena, amin’ny alalan’ny birao maharitra hikatsahana izay mahasoa. Ankoatra ireo, nankahery sy niarahaba ny solombavambahoaka vehivavy noho ny andraikitra noraisin’izy ireny eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena koa ity filohan’ny Antenimierampirenena ity.
“Fotoana izao isandratan’ny vehivavy sy handraisany ny andraikitra tandrify azy”, hoy ny voalazany.
Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (427) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (160) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (72) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (70) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (64) 2 mars 2021 Vehivavy iray maty tao Nosy Be, mitontaly 83 ireo marary CORONAVIRUS ATY DIANA (50) 2 mars 2021